डनडिफ़ोर आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? डण्डीफोर हटाउने यस्ता सजिला उपाय, जान्नुहाेस् – Enepali Samchar
डनडिफ़ोर आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? डण्डीफोर हटाउने यस्ता सजिला उपाय, जान्नुहाेस्
November 19, 2020 admin1 Comment on डनडिफ़ोर आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? डण्डीफोर हटाउने यस्ता सजिला उपाय, जान्नुहाेस्
केटाकेटीका्र अनुहारमा देखिने डण्डीफोरदेखि धेरै मानिस खुब हैरान हुन्छन् । प्रशस्त सुत्दा पनि डण्डीफोर कम हुने त मानिन्छ तर केही सजिला उपायहरूबाट डण्डीफोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विकिहाउले लेखे अनुसार दिनमा कम्तिमा तीन पटक राम्रोसँग मुख धुनुपनि डण्डीफोर घटाउने गतिलो उपाय हो ।
यस्ता छन् थप उपायहरूः
हप्ताको एक पटक डाक्टरको सल्लाह अनसार विभिन्न वस्तुले अनुहार लेपन गर्नुहोस र अनुहार मास्क लगाउनुहोस । अनुहारमा अनावश्य क्रिमहरू नलगाउनुहोस् ।
विहान दिउँसो र वेलुकीको समयमा मनतातो पानीले राम्रोसँग मुखु धुनुहाेस् । मुख धाेएपछि सफा टावेलले पुछ्नुहोस् र अनुहार सुख्खा राख्नुहोस । अनुहार सुख्खा भएको बेला गतिलो क्रिम छान्नुहोस मुखमा आउने डण्डीफोरलाई छुने वा निचोर्ने काम नगर्नुहोस ।
अनुहारमा घाम पर्न नदिनुहोस । चिल्लो खानेकुराहरू नखानुहोस । चकलेट र अन्य प्याकिङ गरिएको खानेकुराले पनि डण्डीफोर बढाउँछ । प्रशस्त पानी पिउनुहोस । प्रशस्त पानी पिएको केही दिनमै तपाईको अनुहारमा फरकपन देखिने छ ।
नायिका स्वस्तिमा खड्का जस्तै देखिने युवती टिकटकमा भाइरल ( हेर्नुहोस् भिडियो)
सावधान ! जिन्स र टाइट कपडा लगाउनुहुन्छ ? जिन्स र टाइट कपडा हेल्थका लागि यस्तो हानीकारक!
जब आफ्ना श्रीमानले स;न्तुष्टि दिन नसकेको भन्दै प्र’हरी चौ’की पुगिन् यी म’हिला अनि यस्तो भयो
1 thought on “डनडिफ़ोर आएर दिक्क हुनुहुन्छ ? डण्डीफोर हटाउने यस्ता सजिला उपाय, जान्नुहाेस्”
Sikum thebe says:
kapal k ko reason le jharne garxa?